$2,140 တန်ကြေးရှိ Free Games တွေ Epic ပေးနိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ
Free Games နဲ့ Epic အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုလို့ မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဂိမ်မာတိုင်း နှစ်ခြိုက်ကျတဲ့ Biggest Title ကြီးကို Free လုပ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်လောက်ဆို စာဖတ်သူတွေ ယူထားလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့။
$29 ကျပ်တန် ဂိမ်းတစ်ဂိမ်းကို Give Away လုပ်ပစ်ဖို့ဆိုတာ နည်းတဲ့အင်အား မဟုတ်လို့ပဲ ၊ စာဖတ်သူတို့ တွက်ကြည့်လေ လူအယောက် ၂ သန်း Claim လုပ်မယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်က $58 သန်းလောက် သွားကျနိုင်ပါတယ်။
ဒါတောင် ဂိမ်းတစ်ဂိမ်းစာ အတွက်ပဲ ရှိသေးတာပါ၊ မတ်လတုန်းက $29 ကျပ်တန် World War Z ကို Free ပေးခဲ့သေးသလို Epic နဲ့ Developer “Saber Interactive” တို့ အဆိုရ ၁ သန်းခွဲ လောက် Claim လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။
ဒိနောက်ပိုင်း WWZ ကစားသူဦးရေ တစ်ရက်ကို ၂ သိန်းခွဲကျော် ရှိလာခဲ့ပြီး မေလ ၅ ရက်နေ့မှာ GOTY (Game of the Year) Edition ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မနေ့တုန်းကလည်း ကစားသူဦးရေ ၇ သန်းကျော်လောက် ပြုံဝင်နေလို့ Server အရမ်းကျပ်ပြီး Down သွားလို့ Fix လုပ်နေရတယ် Rockstar Games ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Why Epic is Given Away Free Games?
ဒါနဲ့ မေးခွန်းတွေ တက်လာကြတယ်၊ ဘာလို့ GTAV နဲ့ WWZ လို ဂိမ်းမျိုးကို အလကား ပေးပစ်တာလဲ?
ကျွန်တော်တို့အတွက် ဂိမ်းကိုပဲ မြင်ပေမယ့် Epic အတွက် $30 တန်လောက်က အသာလေး ပေးနိုင်တဲ့ အင်အားရှိနေလို့ပါ။
PCGamesN ထုတ်ပြန်ချက်အရ Epic Store ကို စတင် ဖွင့်လစ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလကနေ ခုချိန်ထိ Free ပေးခဲ့တဲ့ ဂိမ်းတန်ကြေး $2,140.94 ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် စဥ်းစားကြည့်ပေတော့ ဂိမ်းတစ်ဂိမ်းကို အယောက် ၁ သန်းနှုန်း Claim တယ် ထားဦး၊ Epic ဘယ်လောက် လှူပစ်ပြီလဲ တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။
A total of 108 Free Games
လက်ရှိအချိန်ထိ Free ပေးခဲ့တဲ့ ဂိမ်းပေါင်း ၁၀၈ ဂိမ်း ရှိပြီ ဆိုပေမယ့် စာရေးသူ မှတ်မိသလောက် လင်းနို့ ၇၅ နှစ်ပြည့်တုန်းက Batman: Arkham နဲ့ Lego Batman Trilogies အလကား ပေးခဲ့တယ်။
ဒိနောက် Alan Awake ၊ SOMA ၊ Dark Siders 1 &2လို ရေပန်းစား ဂိမ်းတွေအပြင် 2020 နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာကိုပဲ Assassin’s Creed: Syndicate ၊ Just Cause4လို AAA Title တွေကိုလည်း ပေးခဲ့ပါတယ်။
ခုလည်း The Witcher3နဲ့ Civilization6တို့ Free ပေးသွားမယ်လို့ သတင်းထွက်နေသလို ၅ လ အတွင်း အလှူကြီးပေးနေတဲ့ အကြောင်းပြချက်က ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ? တိကျတဲ့ အထောက်ထားတွေက စပြောရရင် Epic ရဲ့ အဓိက ငွေတွင်းဟာ Fortnite ပါ။
Reason is Fortnite
Sensor Tower ထုတ်ပြန်ချက်အရ Google Play Store နဲ့ App Store ကနေ $1 Billion မက ဝင်ငွေ ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ Fortnite ဂိမ်းကို မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ ၂ နှစ်တာ ကာလအတွင်း စုဆောင်းရရှိတဲ့ အသားတင် ပမာဏကို ပြောတာပါ။
Epic အတွက် ပိုပြီးတော့ ပွပေါက်တိုးတာ COVID-19 အပြင်းထန် နှိပ်စက်နေတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုပဲ ဖြစ်ပြီး Lockdown ကာလ (ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ထိ) တွက်ချက်ထားတဲ့ငွေဟာ $44 သန်း ကျော်ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ App Store နဲ့ Play Store ကနေ 129 သန်းကျော်အထိ Download ဆွဲထားသလို $1 Billion နဲ့ $937,000 အသီးသီး ဝင်ငွေရရှိထားတယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
ကျန်တဲ့ အစိတ်ပိုင်း အတိကျကိုတော့ မဖော်ပြတော့ဘဲ ဝင်ငွေ သောက်သောက်လဲ ရနေတဲ့ Fortnite ကြောင့် အခုလို Free Game ချနိုင်တာလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ The Witcher3လို နောက်ထပ် $30 တန် ပေးဖို့ အခက်ခဲမရှိဘူးဆိုထားလို့ မျှော်လင့်ချက် ရှိနေတယ်ဆိုရမှာပါ။
GTAV လို ဂိမ်းမျိုးကို Steam လို Platform မျိုး အားမနာဘဲ လုပ်ချပစ်တာကိုပဲ စဥ်းစားကြည့်ပါ၊ တခြား Digital Reseller တွေ ဖြစ်တဲ့ GOG ၊ G2A တို့ဆို နေလိုက်တော့။
Epic ခုလို စွာနေတာ UE (Unreal Engine) ကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း Boderlands3၊ Crackdown3၊ Gears5နဲ့ PUBG လို ဂိမ်းမျိုးတွေ သုံးနေကြတာဆိုတော့ တခြား Platform တွေနဲ့ ယှဥ်ရင် စွာနိုင်တဲ့ အင်အားရှိပါတယ်။
Epic Store App တောင်မှ UE နဲ့ Run ထားသလို အခုဆောင်းပါး ဖတ်ရှုရင်း ဘယ်လိုမြင်လဲ? Popular ဖြစ်အောင် တနည်း ဂိမ်မာတွေကို Free Games နဲ့ ဆွဲဆောင်တာ မှန်ပေမယ့် အထင်အမြင်လေး သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး။
Source: Notebookcheck ၊ Sensor Tower ၊ PCGamesN